दुनियाँ – Page 104 – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
५ कार्तिक २०७७, बुधबार १३:२५ English
अब कार पनि रकेटको गतिमा १४ कार्तिक २०६९, मंगलवार ०९:४९
अमेरिकाको पूर्वी क्षेत्रका राज्यहरुमा डर लाग्दो आँधी, नेपाली समुदाय सुरक्षित १३ कार्तिक २०६९, सोमबार २१:४३
पुरुषोत्तम ढकाल, अमेरिका, १३ कात्तिक । अमेरिकाको पूर्वी क्षेत्रमा दशकौ पछी आएको सैंडी नामक डर लाग्दो आँधीले यस क्षेत्रको जनजीवन अस्त ब्यस्त पारेको छ । अमेरिकी सरकारले सैंडी नामक यो डर लाग्दो आँधी र तूफानबाट बच्न आवश्यक तयारी गरेको दावी गरेको छ । अमेरिकी सरकारले यस क्षत्रेमा आपतकाल..
इंडोनेशियास्थित अमेरिकी दूतावासमा आक्रमण गर्ने तयारीमा रहेका आतंकबादीहरु गिरप्तार १२ कार्तिक २०६९, आईतवार ००:१५
जाकार्ता, १२ कात्तिक । इंडोनेशियाको प्रहरीले अमेरिकी राजदूतावास र अमेरिकी वाणिज्य दूतावासमा आक्रमण गर्ने योजना गरिरहेका ११ आतंकबादीलाई गिरप्तार गरेको छ । इंडोनेशियन प्रहरी प्रवक्ता सुहारदी आलियसले संचारकर्मीहरुलाई बताए अनुसार संगठित यो समुहले जाकार्तास्थित अमेरिकी दूतावास र..
आत्मघाती बम विष्फोटमा ४१ को मृत्यु ११ कार्तिक २०६९, शनिबार १२:११
अफगानिस्तान, ११ कात्तिक । उत्तरी अफगानिस्तानस्थित एक मस्जिदबाहिर शुक्रबार भएको आत्मघाती बम हमलामा कम्तीमा ४१ जनाको ज्यान गएको छ । फारयाव प्रान्तको राजधानी मायमनामा मानिसहरु इदको नमाज अदा गर्नका लागि मस्जिदमा एकत्रित भइरहेको समयमा बम धमाका भएको थियो । बम विस्फोट त्यस्तो बेला भयो..
न्युयोर्क टाइम्स छाप्छ, चिनिया प्रधानमंत्री वेनले दुई अर्ब डलर भ्रष्टाचार गरे ११ कार्तिक २०६९, शनिबार ०६:२७
न्युयोर्क, ११ कात्तिक । चिनिया प्रधानमंत्री वेन जियाबाओको राजनीतिबाट संन्यास लिने तयारी संगै न्युयोर्क टाइम्सले उनको परिवारजनले करिब २. ७ अर्ब डलर सम्पति अनधिकृत रुपमा जम्मा गरेको आरोप लगाएको छ । तर चीनले आरोपको औपचारिक खण्डन गरेको छ । न्युयोर्क टाइम्सले वेनले प्रधानमन्त्री..
भारतीय विदेश मंत्री एमएम कृष्णाले दिए पदबाट राजिनामा,मन्त्रि मण्डलमा ब्यापक फेर बदल हुदैं ११ कार्तिक २०६९, शनिबार ०५:५७
नयाँ दिल्ली, ११ कात्तिक । आइतबार भारतीय केन्द्रीय मन्त्रि मण्डल पुनर्गठन हुने चर्चा संगै विदेश मन्त्रि एम एम कृष्णाले शुक्रबार पद बाट राजिनामा दिएका छन् । यसै गरि अर्का प्रभावशालि मन्त्रि अंबिका सोनी पनि पुनर्गठित मन्त्रि मण्डलबाट बाहिरिने भएका छन् । स्रोतका अनुसार सोनीलाई..
रिपब्लिकन नेता रिचर्ड मर्डोकको बलात्कार सम्बन्धि विवादास्पद अभिव्यक्तिले रोम्नीलाई पार्यो अफ्ट्यारो ९ कार्तिक २०६९, बिहीबार २१:३६
अमेरिका (एजेन्सी)। बलात्कार सम्बन्धि रिपब्लिकन नेता रिचर्ड मर्डोकको विवादास्पद अभिव्यक्तिले राष्ट्रपति उम्मेदबार मिट रोम्नीलाई संकट पूर्ण अवस्थामा पुर्याएको छ । राष्ट्रपति ओबामा र उनका समर्थकहरु यो मुद्धालाई जोड तोडका साथ् उठाउने तयारीमा जुटेका छन् । ओबामा र उनका समर्थकहरु..
बेलायती महिलाको पांच बर्षे रोमान्चक जंगल यात्रा ६ कार्तिक २०६९, सोमबार २०:५२
लन्डन । मरीना नाम गरेकी बेलायती महिलाले दावी गरेकी छिन उनले पांच बर्ष सम्म कोलम्बियाको जंगलमा बाँदरको स्याहार सुसार गरेकी थिईन । उनको भर्खरै सार्बजनिक जंगल बुकमा उनलाई अपहरण गरि जंगलमा एक्लै छोडिएको थियो । जंगलमा रहदा मरीनाले चरा र खरायो सिकार गरि पेट भर्ने गरेको र उनको बारेमा..
भारत भ्रमणमा रहेकी अस्ट्रेलियाकी प्रधानमन्त्री चिप्लिएर लडिन् १ कार्तिक २०६९, बुधबार २०:५९
एजेन्सी, १ कात्तिक । भारत भ्रमणमा रहेकी अस्ट्रेलियाली प्रधानमन्त्री जुलिया गिलार्ड नयाँ दिल्लीको राजघाटस्थित गान्धी मेमोरियलबाट फर्कने क्रममा चिप्लिएर लड्न पुगेकी छिन् । स्कर्ट र हिल जुत्ता लगाएर भिजेको घाँसमा हिँडिरहेकी जुलिया चिप्लिएर अकस्मात् लडेपछि पुरुषहरुले उठाउनु..
कम्बोडिया पूर्व राजा नरोद्दम सिंहानुकको मृत्यु ३० आश्विन २०६९, मंगलवार १७:४३
नोमपेन्ह, ३० असोज । कम्बोडियाका पूर्व राजा नरोद्दम सिंहानुकको सोमबार बेइजिङस्थित अस्पतालमा मृत्यु भएको छ। उनी ८९ वर्षका थिए । कम्बोडियालाई उपनिवेशबाट मुक्त गराएपछि उनी देशका सक्रिय राजा बनेका थिए । तर पछि उनलाई खमेररुज शासनले कठपुतलीका रुपमा राखेका थिए। लाखौँ मर्ने गरी पोल पोटले..
युरोपियन युनियनलाई नोबेल शान्ति पुरस्कार २६ आश्विन २०६९, शुक्रबार २०:५९
ओस्लो, २६ असोज । युरोपियन युनियनलाई यो वर्षको नोबेल शान्ति पुरस्कार दिइने भएको छ। युरोपको आर्थिक रुपान्तरणमा निर्वाह गरेको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै पाँच सदस्यीय नोबेल पुरस्कार कमिटीले इयुलाई सो पुरस्कार दिने निर्णय गरेको हो । आर्थिक मन्दीबाट गुज्रिरहँदा पनि २७ मुलुकलाई एकीकरण..
दुई वैज्ञानिकलाई नोबेल पुरस्कार २४ आश्विन २०६९, बुधबार २२:०८
स्टकहोम । फ्रान्सका सेर्ज ह्यारोस तथा अमेरिकाका डेविड वाइनल्यान्डले यस वर्ष भौतिकशास्त्रतर्फ नोबेल पुरस्कार जितेका छन् । क्वान्टम भौतिकशास्त्रमा दिएको योगदानका लागि दुवैलाई सो पुरस्कार प्रदान गरिएको हो । क्वान्टम भौतिकशास्त्रले कम्प्युटर क्षेत्रमा व्यापक क्रान्ति ल्याउने..
किङफिसर कम्पनीले तलब दिन नसकेपछि… १९ आश्विन २०६९, शुक्रबार १२:०२
काठमाडौं, १९ असोज । केही समयदेखि संकटमा परेको भारतको एक नीजि लगानीको एयरलाइन्स किङ्ग फिसरले आफ्ना कर्मचारीलाई तलब दिन नसकेको विषय यतिबेला निकै चर्चामा छ । यसरी कामको पारिश्रमिक नपाएपछि सम्वद्ध कर्मचारीका परिवारमा त्यसको नकारात्मक असर पर्न थालेको देखिएको भारतीय मिडियाहरुले..
अष्ट्रेलियामा तीन कलेज बन्द हुंदा भारतीय विद्यार्थी प्रभावित १८ आश्विन २०६९, बिहीबार १७:१३
काठमाडौं, १८ असोज । तालिमको स्तर पूरा नगरेको भन्दै अस्ट्रेलिया सरकारले व्यावसायिक शिक्षा दिने तीन कलेज बन्द गरेको छ। भिक्टोरिया र न्यु साउथ वेल्सका कलेजहरु बन्द गरिएका हुन्। अस्ट्रेलियन स्किल क्वालिटी अथोरिटीले गरेको अनुगमनपछि तीन कलेजहरु बन्द गरिएका हुन्। बन्द गरिएको..
अमेरिका छिर्न ताइवानीलाई भिसा नचाहिने १७ आश्विन २०६९, बुधबार १९:२८
काठमाडौं, १७ असोज । संयुक्त राज्य अमेरिकाले ताइवानीलाई अमेरिकी प्रवेशाज्ञा नचाहिने व्यवस्था लागू गरेको छ। पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि यस्तो नीति अवलम्वन गरिएको अमेरिकी अधिकारीहरुलाई उद्दत गर्दे एजेन्सीहरुले उल्लेख गरेका छन् । ह्वाइटहाउसले जनाएअनुसार अब ताइवानीहरुले विना कुनै..
हङकङमा जहाज जुध्दा ३६ को मृत्यु १६ आश्विन २०६९, मंगलवार १४:२७
काठमाडौं, १६ असोज । हङकङस्थित लामा आइलैण्डमा दुई यात्रुवाहक पानीजहाज ठोक्किदा ३६ जनाको मृत्यु भएको एजेन्सीहरुले जनाएका छन् । सोमबार राति चीनको ६३ औँ राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा हुने आतिशबाजी हेर्न यात्रुहरू प्रर्दशनी स्थलतर्फ आइरहेका थिए । दुबै जहाजमा सवार एकसयभन्दा बढी घाइते भएका..